လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး
Tag Archives: လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး
Dejero နည်းပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဂုဏ်သတင်းEmmy® Award ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိ
Dejero, မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများအတွက်ခဲ့စဉ်ကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများကိုမိုဃ်းတိမ်ကို-managed ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဆန်းသစ် - Dejero 10 [Waterloo, အွန်, နိုဝင်ဘာလ 15, 2018] လှည့်အဖြစ်ဆုချီးမြှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်၏လယ်ပြင်မှထူးချွန်အလှူငွေအသိအမှတ်ပြု ၏ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဂုဏ်ပြုခြင်း, 'အင်ဂျင်နီယာတီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်အကောင်းဆုံး' 'များအတွက်ဂုဏ်သတင်းနည်းပညာ & အင်ဂျင်နီယာEmmy® Award ဆုချီးမြှင့် ...
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် Cleveland ရဲ့ ATSC 3.0 စမ်းသပ်ဘူတာမှနည်းပညာနှင့် System Integration အတွေ့အကြုံများရရှိစေ
Princeton, NJ - စက်တင်ဘာ 7, 2017 - Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့ကလူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအသင်း (NAB), စားသုံးသူနည်းပညာအသင်း (CTA), Third-party နည်းပညာပံ့ပိုးနှင့် Cleveland ရဲ့ Tribune, အသံလွှင့်ဘူတာရုံ WJW-TV ကိုအတူပူးပေါင်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် တစ်ခုလည်ပတ် ATSC 3.0 စမ်းသပ်ဘူတာရုံကို set up ရန်။ Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ GuideBuilder (R) XM ATSC 3.0 အချက်ပြခြင်းနှင့်ကြေညာချက်မီးစက်နှင့် StreamScope (R) XM MT စောင့်ကြည့်ရေး ...
AccuWeather Superior တိကျပြတ်သားမှု၏ 2017 နှစ်များနှင့်ဘဝ-Saving သက်ရောက်မှုများအတွက်အသိအမှတ်ပြု, 55 NAB Show မှာ StormDirector + တီထွင်ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
AccuWeather StormDirector + ဒေသခံရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရှေ့တွင်ယှဉ်ပြိုင်၏နေဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့စျေးကွက်များတွင်အနိုင်ရဘို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုအတွက်တော်လှန်ရေးသစ်ကိုရာသီဥတုတင်ဆက်မှုတိုးတက်မှု feature ပါလိမ့်မယ်။ AccuWeather ကို Global မိုးလေဝသရေးစင်တာ - မတ်လ 15, 2017 - AccuWeather, ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ယနေ့ဖြစ်မည်ဟု, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်အပြန်အလှန်ရာသီဥတုစနစ်, StormDirector + ®အတွက်သီးသန့်ထုတ်ကုန်တီထွင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
အဆိုပါ EAS (အရေးပေါ်အချက်ပေးစနစ်) နှင့်သင်!
ခေါ် "လေ့အကျင့်ကောင်းများ၏အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်" - အဆိုပါ NAB လက်နက်စံချိန်စံညွှန်းပြင်ဆင်မှုအား (နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား Code ကိုကနေထောက်ခံအားပေးမှု (သို့မဟုတ်ဥပဒေပြုရေးနှင့်စည်းမျဉ်းရေးရာ) မှပညာရေး, သုတေသနနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှု (NAB Labs က) မှတိုးချဲ့အတူဤသည်နေ့ရက်ကာလ Multi-faceted ဖြစ်ပါသည် ) In-အကြားအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ညီလာခံများနှင့်အရာခပ်သိမ်းအွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။ ရုံကသူတို့ရဲ့ website သို့ဝင်ရောက်ကြရုံဘယ်လောက်အားဖြင့်သင်တို့ကို overwhelms ...
သငျသညျသေး 2015 NAB Show ကိုတက်ရောက်ရန်မှတ်ပုံတင်ရှိပါသလား? နီးပါးနောက်ကျလွန်းပဲ! ဒီနေရာမှာမှတ်ပုံတင်ပါ! နှင့်အသံလွှင့် Beat ရဲ့ပြသခဲ့သည်-ဧည့်ကျင့်ထုံးကိုသုံးပါရန်သေချာစေပါ: LV3662